किरात राई जाति हुनुमा के–को पीडा ? «
किरात राई जाति हुनुमा के–को पीडा ?
प्रकाशित मिति : २४ भाद्र २०७५, आईतवार ०६:२९
किरात राई जातिका सहअस्तित्व बचाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्दै रहेका राई विद्यार्थीहरूले किरात राई विद्यार्थी सांस्कृतिक तदर्थ समिति गढन गरेका थिए, वि.स.२०४५ सालतिर । त्यही तदर्थ सकितिले अनन्त ः किरात राई यायोक्खाको रूप लिन पुगेको हो । यसको केन्द्रीय कार्यलय काठमाडौंमा रहेको छ । भने आज आएर किरात राई यायोक्खा २३ जिल्लामा शाखा विस्तार भइसकेको छ ।
किरात राई यायोक्खा भनेको यो देशमा रहेका आदिवासी किरात राईहरूको सामाजिक संगठन संस्था हो भनेर आम समाज र राज्यले बुझेको छ । यतिमात्र होईन,किरात राई यायोक्खा हङकङ, अमेरिका, बेलायत, जापान, बहराइन, कतार, युरोप, अष्ट्रेलिया, कुवेत, द.कोरीया, मलेशीया, दुवई, साउदीलगाएत जहाँ–जहाँ राईहरू पुगेका छन् त्यही मुलुकमा यायोक्खाको नामबाट एकजुट हुदैं आएका छन् । जातीय पहिचान,सामाजिक तथा साँस्कृतिक एकता कायम गदैआएका छन् । किरात महिला, पुरूष, केटाकेटी, बूढावुढी एकै हारमा बसेर ढोल ढुङ्कु–ढुङ्कु र भ्याम्टा झ्याम–झयाम बजाएर एकसाथ गोलबद्ध भएर नाच्दछन् । साकेला सिली अर्थात साकेन्वा नाँच हरेक उभौली÷उधौली सबैका निम्ति भेटघाट, रमाईलो गर्ने अवर परापूर्व कालदेखि बसेको एउटा परम्परा हो ।
हुन त ती बन्धुहरू संयक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि –१६९ आत्मनिर्णयको अधिकारको हवाल दिएर आफ्ना कदमलाई सही सावित गर्न तत्लिन छन् । तर यो कुरा पनि उनीहरूलाई थाहा छ कि सामाजिक जातिय आधिकारलाई कुल्चेर व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिका निम्ति त्यस महासन्धिको बँुदा लागू हुन सक्दैन । र व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति त्यस महासन्धि बनाईएको पनि होईन । तसर्थ, किरात राई भनेर चिनिएका हामी बान्तावा, चाम्लिङ, कुलुङ, साम्पाङ, खालिङ, दुमी, वाम्बुले, पुमा, नाछिरीङ, बाहिङ, कोयी÷कोयू, याम्फू, छिलिङ, लोहरूङ, मेवाहाङ, तिलुङ, जेरूङ, दुङमाली, लिङखिम, साम, छिन्ताङ, सोताङ, आठपहरिया, बुङलावा, वालिङ, पोल्माचा, फङदुवाली, छुक्वा, बेल्हारेलगाएतका मातृभाषीहरू फुट र बहकाउबाट सचेत हुनु जरूरी छ ।
‘राई शब्दको उत्पत्ति संस्कृतिमा राजा भन्ने शब्दबाट आएको हो । संस्कृतिमा ‘राजा’ प्राकृत भाषामा राई र नेपालीमा फेरि ‘राजा’ भएको हो । भन्नुहुन्छ –पूर्व राजदूत तथा भाषाशास्त्री प्रा. डा. नोवलकिशोर राई । नेपाली भाषाको इतिहासमा ‘राई’ शब्द लगभग सात सय वर्ष पहिलेदेखि नै चलिआएको पाईन्छ । मानिसको पेशा वा उत्पत्तिस्थान आदिवाट पनि जात, थर आएकै छ । भने उपाधिवाट जात वा थर हुनु कुनै अनौठो विषय होईन । आजभोली चौधरी,लामा, देवान, मुखिया, र सुब्बाजस्ता जात थरहरू पनि त्यसरी नै सुरू भएको हो । त्सकारण जसरी थारूहरू चौधरी भए अथवा सुनुवारहरू मुखिया भए कालक्रममा ‘खम्बू’ वा ‘जिमी’हरू राई भए । आज यो शब्दले इतिहासको कुनै कालखण्डमा उपाधि बुझाएको भए पनि जात वा थर बुझाउने गरेको स्पष्ट छ । भाषाकै कारणले हामी अर्के जाति हौ भनेर टुक्रिनु र छुट्टिनु अवश्य पन लाभदायक होइन भन्नुहुन्छ ।
एकैसाथ रहँदा सानातिना मतमतान्तर भएपनि हाम्रो एकतामा बल हुन्छ । र यसले हामीलाई फाइदा पु¥याउँछ । केवल भाषिक कारणले नै आलग–अलग भएर जाने हो भने आजका राई भनिने जातहरू लगभग २०–२५ जातिमा बाँडिनु पर्ने देखिन्छ । यसो हुनु कुनै पनि आलतमा हाम्रो समाजको हितमा छैन । ‘भाई फुटे गवार लुटे’ भन्ने उखान बिर्सनु हुँदैन भाषाहरू लोप भइराखेको अवस्थामा राज्य र भाषिक समुदाय दुवैले चनाखो भएर यसको संरक्षण र संवद्र्धन गर्नुपर्छ । भाषिक अधिकारका निम्ति समुदायले राज्यसँग मिलेर सहकार्य गर्नुपर्छ ।
अर्कोतर्फ प्रकृतिपुजक किरातहरूको धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गर्ने षडयन्त्र तीव्ररूपमा भइरहेको छ । किरात धर्म को नाम दिई किरातीहरूको मौलिकता, खानपान, चाडपर्व, संस्कार, पितृपूजा, आदिलाई परिवर्तन गराएर फलफूलतर्फ रूपान्तरण गदैंछन् । जुन मौलिक किरात धर्म होइन । यसवारे पूर्व सांसद टंक राई भन्नुहुन्छ – यो त पन्थको रूपमा भरखरमात्र जन्मेको विचार हो । किरात धर्मग्रन्थ मुन्धुम अलिखित भएको हुनाले यस्तालाई जे पायो त्यही गर्न र भन्न अलिक सजिलो भएको छ । केही समय अघि मैले टेलिभिजनको बहस कार्यक्रममा डा. स्वामी प्रपन्नचार्यसितको अन्र्तरवार्ता हेरेको थिए ।
स्वामीले एउटा वाक्य भने –फाल्गुनन्द गुरूसँगको संगतमा म थिएँ र उनी जोसमनी पन्थद्वारा दीक्षित भएको पन्थ हो । र त्यसलाई नयाँ ढाँचाबाट फाल्गुनन्दले विकसित गरेको धर्मलाई अहिले किरात धर्मको रूपमा अनुयायीहरूले फैलाउदै आएका छन् । शाायद यो एक–डेढसय वर्ष अगाडिको कुरा हो । फाल्गुनन्दलाई भेट्ने मान्छेहरू अहिलेसम्म जीवितै छन् । अब कहाँको पाँच–छ हजार वर्ष अगाडिदेखिको विकसित भएर आएको किरात धर्मको कुरा कहाँको हिजो –अस्तिको कुरा । पत्याउने पनि आधार र इतिहास चाहियो । यो फेद न टुप्पाको कुरा कति दिन टिक्ने हो । फाल्गुनन्दले किरात धर्ममा केही सुधारका कुराहरू अगाडि सारेका छन् । तर, सुधार भनेको मौलिक गरणहरू नहराउने गरी गरिनु पर्दछ । त्यसलाई मात्र सुधार भन्निछ । तर, यो नयाँ पन्थले हजारौं हजार वर्ष पुरानो संस्कृति र परम्पराबाट विकसित हुँदै आएको किरात धर्मका मूलभूत विश्वास र मान्यतालाई खण्डित गर्ने काम गरेको मैले देख्दैछु ।
एउटा प्रकृतिसँग नजिकको सम्बन्ध राख्ने जाति अनि प्रकृतिका संरक्षणको मुद्दा अहिले विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको बेलामा प्रकृतिसँग नै अत्यन्त सामीप्य, अन्यन्तै सामन्जस्य र मैत्रीभाव राख्ने किरात धर्मको आस्था, विश्वास, मान्यता र जिओलजी, किरा दर्शनलाई यो वर्तमानमा भनिएको तथाकथित किरात धर्मले प्रतिनिधित्व गदैन । हुनसक्छ किरातको नामका अर्को एउटा धर्म आयो के फरक प¥यो ? हिन्दुको नाममा व्यापक धर्महरू छन् । एक–दोस्रोसँग काटाकाट गर्ने, एक–अर्काले छोएको नखाने धर्महरू पनि छन् भने यसलाई पनि त्यती धेरै अनुचित नमानौं । तै पनि यसले आम्रो समाज र किरात धर्मलाई होच्याउने, निष्प्रभावी बनाउने र किरातहरूको स्वाभीमानी परम्परा, किरातहरूको लडाकुपन, जोश र बहादुरी चरित्रलाई आघात पु¥याउने कामहरू गरिरहेको छ ।
यसले अगाडि सारेको गतिविधिहरू हेर्दा किरात धर्म विरोधिहरूले यो भित्रबाट व्यापक छलफल गरेको व्यूहरचना हो कि जस्तो हामी देखिरहेका छौं । हजारौं वर्षको हिन्दुहरूको प्रयत्नको वावजुत पनि यो धर्म नष्ट भएन, चुलालाई बचाएर राखे किरातीहरूले । अहिले खास क्रिश्चियनिटी र तथाकथित किरातधर्मीहरूले आम्रा गरिबी र अशिक्षाजस्ता मूलभूत कमजोरीहरू माथि फाइदा उठाएर हामीलाई हाम्रो इतिहासबाट बेदखल गर्नु हामीलाई हाम्रो इतिहासबाट बेदखल गर्नु हामीलाई हाम्रो इतिहासबाट पृथक बनाउनु छुट्याउनु , टुक्राउनु लागिपरेका छन् हामीलाई एतिहास बेगरको नांगा जातिको रूपमा स्थापित गराउन कोसीस गरिरहेको छन् । तसर्थ आजका सचेत किराती बन्धुहरूले त्यसको तीव्र प्रतिकार गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
निप्सुङबाट (लेखक किरात राई यायोक्खाका पूर्व केन्द्रीय सचिव हुन् ।)